Dagaal ka dhacay Magaalada laas-Caanood ee Gobolka Sool – XAMAR POST
Dagaal ka dhacay Magaalada laas-Caanood ee Gobolka Sool
By Zakariye iiman On May 17, 2019
Dagaalka oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah ayaa xalay Magalada laas-Caanood ee Xarunta Gobolka Sool waxa uu ku dhexmaray Ciidamo ka wada tirsan Soomaaliland oo gacanta ku haya Magaalkadaas.
Dadweynaha Magalada laas-Caanood ayaa mar kaliya ka warhelay rasaas ka dhaceysa Gudaha Magalada,waxaana la sheegay in dagaalka oo socday mudo kooban uu sababay dhimashada hal askari iyo dhaawaca mid kale.
“Majirto wax shacab ah oo ku waxyeeloobay dagaalka Magaalada Laas-Caanood ku dhexmaray Ciidamo ka wada tirsan Soomaaliland,waxaan maqalnay in uu muran dhexmaray laakin ma naqaan waxay isku heystaan,hadda jawiga waa caadi oo ciidamadii waa la kala qaaday ayuu yiri qof ka mid ah dadka Laas-Caanood.
Wararkii u dambeeyey ee saakay naga soo gaaraya Magalada Laa-Caanood ayaa waxaa ay sheegayaan in xaaladu ay tahay mid degan,isla markaana isku-socodka dadka iyo Gaadiidka oo xalay inta badan istaagay ay saakay si caadi ah u socdaan.
Saraakiisha Ciidamada Soomaaliland ee Gobolka Sool weli wax faah faahin ah kama bixin dagaalka Magalada Laas-Caanood ku dhexmaray Ciidamo ka wada tirsan Maamulkaas,waxaana dagaalkaas uu ahaa mid soo lab laabtay.
Amisom oo mudo kordhin lo sameyay howl galkooda soomaaliya
Saraakiishii kormeerayaasha Imtixaanka oo kasoo baxay deegaanada Hir-Shabeelle